Archive du 20181126
Mba matotra re ry Jean a a !
Tena izao tokoa ve ry Jean ilay hoe « ny tanana zatra mitsotra tsy afaka mivonkona intsony » ?
Olona Hasin’ny Tany “Nisy nilatsadatsa-poana teto !”
Nosokajian’ny avy eo anivon’ny vovonana politika Olona Hasin’ny Tany (OHT) ho 3 mazava tsara ireo mpisehatra politika miditra lalina amin’ny toe-draharaham-pirenena ankehitriny.
Teatra Tropy Jeannette Manana mpandimby i Mamy Rajaonarivelo
Tontosa omaly alahady 25 novambra tetsy amin’ny AFT “Alliance Française Andavamamba” ny hetsika Tsiahy an-kira “Souvenirs en Chansons Theatrales” natao hahatsiarovana manokana an’i Mamy Rajaonarivelo
Mitohy ny fitsaram-bahoaka Roalahy maty nodorana velona
Lehilahy roa no indray matin’ny fitsaram-bahoaka tao amin’ny Kaominina Ambohitsilaozana, distrikan’Ambatondrazaka ny faran’ny herinandro teo.
Tetibolam-panjakana 2019 Ho ampy ve ny fe-potoana handinihana azy ?
Lany teo anivon`ny Antenimieram-pirenena ny 20 novambra lasa teo nandritra ny fivoriana azon`ny besinimaro natrehina ny fandaharam-potoana fahatelo iasan`ny depiote hatramin`ny 5 desambra ho avy izao.